Dzidza Nezve Vedu Vanotyisa Vashandi »Hodges University
Dzidzo yepamusoro Inodzidziswa neVakadzidza Nyanzvi
Hodges U Ruzivo & Vashandi
Hodges U inopa imwe-ye-ye-mhando dzidzo isingawanikwe kumwe kunhu kunyangwe iwe uri kuwana yako dzidzo pa-kambasi, online, kana mune yakasanganiswa fomati. Sei? Yedu fakaroti, Yakawedzera fakitori, uye Vashandi vane chinangwa chimwe - kukubatsira iwe kubudirira! KuHodges, tinonzwisisa matambudziko evakuru vadzidzi vane basa nebasa remhuri. Ndosaka takashanduka kuti tikupe maturusi aunoda kuti ubudirire mune zvedzidzo uye mune rako basa.
MaDean pane chimwe nechimwe chezvikoro zvedu akazvipira kubudirira kwako. Ivo vanotora nguva yekusangana newe kuti vabatsire mukudarika chero matambudziko aungave uchisangana nawo. Yakavhurika musuwo mutemo inoreva kuti mumwe nemumwe wedu maDhian anowanikwa Ndokumbira utambanudze ruoko, kunyangwe kana uchingozvizivisa iwe. KuHodges University, maDhian edu anoda kuti iwe uzadzise zvinangwa zvako zvedzidzo! Ngatibatsirei imi munzira.
Nenhengo dzeFakhalthi yedu, iwe unowana chinoshanda chevadzidzi uye adjunct fakisheni vanopa iyo-kune-imwe koreji dzidzo iwe yaunokodzera. Makirasi edu madiki emakirasi anoita kuti zvive nyore kugamuchira iyo yakasarudzika kutarisisa kwakakosha kuti iwe usvike kune ako edzidzo uye ebasa zvinangwa. Kudzidza kubudirira muhupenyu hwese uye isu tiri pano kuzokutsigira iwe sekuda kwako kwekuwedzera ruzivo kuchikura. Uyezve, nekuti yedu yunivhesiti fakaroti nhengo vane ruzivo muminda yavanodzidzisa, iwe unozodzidza zvinopfuura dzidziso uye zvizhinji zvezvaunodzidza zvinogona kushandiswa munzvimbo yako yazvino.
Vashandi vedu varipo kwamuri. Kubva kuvakwazisa vedu kune vanobvumidzwa kune rubatsiro rwemari uye veterans services centre vashandi - isu takufukidza. Vashandi vedu varipano kuzokubatsira iwe nhanho imwe neimwe yenzira, kunyangwe kupfuura kupedza kudzidza.
Tsvaga Directory Kutsvaga